That's so good, right?: 2015
ပထမဆုံးစပြောလာသောစကားမှာပင် မမ ဘာမှမပြောင်းလဲသေးပါလားဟုသူသေချာသွားတော့သည်။
အတွေးများစွာဖြင့်သူမကိုကူကယ်ရာမဲ့စွာလှမ်းကြည့်မိတော့သူ့ကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားဟန်မရှိပဲ မီနူး ထဲမှာ
Tequilla sunrise, black Russian , Screw driver …ဟင့်အင်းပြင်းနေမလား။
Gin Fizz တစ်ခွက်’
‘ မ စပ်သလောက်မကောင်းဘူး’
ဒီလိုအပြောတွေ ဒီလိုအပြုံးတွေနဲ့ပဲ မောင်သူမကိုမချစ်ပဲမနေနိုင်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာပေါ့။
သူမကြိုတင်စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သော ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီး ကိုယ့်ထက်ပညာတတ် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်
ကလေးကိုမုန့်ပေးကြိုက်တာ ဟုစသလိုလိုနှင့်အတည်ပြောကြသောစကားတင်းများ အပြစ်တင်ငြုစူသော
နာကြည်းစွာနှင့်သူတွေးသည်။အနည်းဆုံးတော့ ကျွန်တော် မ ကိုဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုတာနားမလည်ဘူး။
မလိုက်အောင်တမင်ကြီးရင့်ပုံဖမ်းထားသော မမတစ်ယောက်ကိုစ တွေ့ကတည်းကပေါ့။
ထိုစဉ်ကတော့သူသည် မ ပြောတတ်သည့် တန်ဖိုးဟူသောစကားလုံးကိုကောင်းစွာနားမလည်သောပေါ့သွမ်းသွမ်း
လိမ့်မည်ဟုသူမတွေးခဲ့ဖူးတာသေချာ၏။ ဘယ်လိုမိန်းကလေးနှင့်မှ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိူးကိုမှရင်မခုန်ခဲ့ဖူး
သောသူသည် မ မျက်နှာကလေးကိုတစ်ရက်မမြင်ရရင်မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်သောအခါကိုယ့်ကိုယ်ကို
သူ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်အတွက်တော့ မမ ကိုအမြဲကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါသည်။မမ နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခွင့်ရခဲ့သောကာလတို
သူဆံပင်အရှည်ထားတာ မ မကြိုက်
သူကြည့်သော စိတ်ကူးယဉ် အချစ်ဇာတ်လမ်းများကို မ မကြိုက်(မ ကနည်းနည်းမှစိတ်ကူးမယဉ်တတ်သူဖြစ်သည်)
simple plan ကိုမကြိုက်
ကျွန်တော့်ကိုပင် မမ ကြိုက်ပါရဲ့လား။
အတူလမ်းသွားရင်း မ လက်ကလေးကိုကိုင်ထားခွင့်မရသည့်အခါကသိကအောင့်ဖြစ်ရသည့်ခံစားချက်ကို
သူနှင့်မ အကြောင်းကိုမသိသောမသူငယ်ချင်းများနှင့်လမ်းမှာဆုံစဉ်က မောင်လေးပါဟုပြောပြီးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တော့
သူ့ရင်ထဲတွင်ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရသည်ကိုလည်း မ ဘယ်တော့မှလက်ခံလိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်။
ပြောမိလျင်ပင်သူက အသေးအမွှားလေးတွေကိုပင်ပြသနာရှာတတ်သူ အရေးမပါသည့်အရာတွေကိုရှေ့တန်းတင်
တတ်သူဖြစ်ရပြန်သည်။တစ်ခါတစ်လေတော့ သူ့ကို မ ဘာကြောင့်များရွေးချယ်ခဲ့ပါသနည်းဟုနားမလည်နိုင်ဖြစ်ရ
တတ်သည်။သူ့ထံတွင် မ နှင့် မသူငယ်ချင်းတွေအများစုရှေ့တန်းတင်ကြသော ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးတွေမရှိ
လေးစားလောက်သော တည်ငြိမ်မှုမရှိ။ သူ့မှာရှိသည်က မကိုသိပ်ချစ်သည့်အချစ်တစ်ခုတည်း...။
အဲ့ဒီအချစ်အတွက်နဲ့ပဲကျွန်တော့်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလို့တော့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုအထင်မကြီးရဲတာအမှန်ပါ မမ။
သူငယ်ချင်းများ၏တိုက်တွန်းမှုဖြင့်စကော်လာ တစ်ခုကိုလျှောက်ခဲ့စဉ်က မကိုအသိပေးဖို့သူစိတ်ကူးမရခဲ့ပေ။
ကံကောင်းထောက်မစွာ သူအောင်သွားတော့လည်း မကိုအသိမပေးဖြစ်သေး။
အဓိက ကတော့မ နှင့် နှစ်နှစ်တာကာလရှည်တစ်ခုလုံးခွဲနိုင်လိမ့်မည်ဟုသူ့ကိုယ်သူမယုံကြည်တာကြောင့်ဖြစ်သည်။
‘အင်းဟုတ်တယ်..ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ကအားလုံးပြီးတော့မှ မ ကိုအသိပေးမလို့စီစဉ်ထားတာ’
မင်းရှေ့မှာရပ်နေတဲ့မိန်းမဟာမင်းပြောလာမယ့် surprise ဆိုတဲ့အသံမှာ
‘ မ ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ဒေါသကြီးနေရတာလဲ
ကျွန်တော်မ ကိုဖွင့်မပြောဖြစ်သေးတာ surprise လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး
မ ပြောတာသိပ်မှန်ပါတယ်။မ အရယ်အပြုံး စကားလုံးတွေကိုသာယာနေသမျှအဲ့ဒါတွေရဲ့အဖြေကိုအချစ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။အချစ်စစ်ဆိုတာစကားလုံးတွေနဲ့ဖော်ကျူးစရာမလိုပါဘူးလေလို့ကျွန်တော်ယုံခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးတော့စကားလုံးတစ်လုံးအကြည့်တစ်ချက်နဲ့တောင် မကို ပြန်လည်မချေပရဲတဲ့ကျွန်တော်..ဟိုးအဝေးကြီးကို
သူ့အားပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်သည်ကိုမကြိုက်ဟန်ဖြင့်မျက်မှောင်ကုတ်ကြည့်သောဟန်သည် ဆရာ မတစ်ယောက်အဖြစ်အသားကျခဲ့သော မ၏ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြစ်သည်။တကယ်တော့ကျောင်းသားတစ်ယောက်မှာလည်း
' မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်တကယ်မရှင်းလို့ပါ'
လှသောမရဲ့ နူတ်ခမ်းတွေကဘာကြောင့်များအမြဲတင်းတင်းစေ့ထားခဲ့ပါသလဲ မမ။
တစ်ခေါက်တစ်ခါမှမငြင်းမိပဲအမြဲတမ်းရောက်လာခဲ့တဲကောင် ကို မနှလုံးသားရဲ့ဘယ်နေရာမှမမ ထားခဲ့ပါသလဲ။
ဘယ်အခွင့်အရေးမှမတောင်းဆိုခဲ့ဖူးပဲ မပြောသမျှအမြဲခေါင်းငြိမ့်နားလည်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကို ဒီလောက်ရက်စက်
Posted by Alex Aung at 11:14 AM No comments:
ထင်ရှူးပင်လေးတွေ ၀ိုင်းပတ်နေတဲ့ အေးမြမြလေတွေ ၀န်းရံ ထားတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးတစ်မြို့ကို ကျွန်တော်ဧည့်သည် အဖြစ် ရောက် ရှိနေတာပါ။ နေ့ခင်းတွေမှာ မပူမအေး အနေ တော် နေထိုင်လို့ အဆင်ပြေလှသော်လည်း ညပိုင်းတွင်တော့ အတော်အေးလှသည်။ ညပိုင်းတွင် ဤမြို့လေးကို ဆိုက်ရောက် ခဲ့သော ကျွန်တော် ရာသီဥတုရဲ့ တိုက်တွန်းမှုကြောင့် မြို့အစွန် နားက တည်းခိုခန်းအသေးစား လေးမှာ အမြန်ဝင်နားလိုက်ရ ပါခြင်းပါပဲ။
တံခါးကိုဖွင့်ပေးသော လူကြီးမှာ ဆက်ဆံရေးကျဲတယ်ဗျ။ တံခါး ကို ၀င်သာရုံဖွင့်ပေးပြီး ကျွန်တော့်အထုပ်အပိုးတွေကို လည်း ဂရုတစိုက် ယူဆောင်ပေးခြင်းမရှိ။ မျက်နှာမှာ အပြုံးမရှိတဲ့ ခပ် ရွယ်ရွယ်မိန်းမကြီးက အေးစက်စက် နို့တစ်ခွက်နှင့် အသင့်စား ပေါင်မုန့် နည်းနည်းကို ညစာအဖြစ် ကျွေးတယ်။
စားသောက် ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ရှေးဟောင်းလှေကားထစ်များမှတစ်ဆင့် ကျွန်တော့် အခန်းရှိရာကို တက်လာရ တာဗျ။ နံရံနားက မီးဖို အပူကြောင့် အခန်းတစ်ခုလုံး အေးနေမှန်း သတိထားမိရကာ သစ်သားကြမ်းပြင်များဟာလည်း ခြေသံခပ်ပြင်းပြင်း ဖြင့် လျှောက်နင်းလိုက်လျှင် ကျွံကျတော့မည့်ဟန်။ ပင်ပန်းနေတာ ကြောင့် ဘာမှလုပ်မနေတော့ဘဲ အ၀တ်တွေအမြန်လဲလှယ် လိုက်ပြီး နောက် ခုတင်ဘေးက တွေ့တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဆွဲ ကိုင်ကာ အိပ်ယာထဲဝင်ခဲ့လိုက်တော့တာပေါ့။
စာအုပ်က လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၂၀လောက်က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မြို့လေးရဲ့ လမ်းညွှန်စာအုပ်လေး။ ပထမစာရွက်ကိုလှန်ကြည့်လိုက်တော့ စာအုပ် အစွန်းနားမှာ 'မိုးမခ တည်းခိုခန်း' ဆိုတဲ့ တံဆိပ်လေး နှိပ်ထားပါတယ်။ နှစ်များစွာအတွင်း ထူးဆန်းမှုအကြောင်းအရာ များစွာ ဖြစ်ပျက် ခဲ့ကြောင်း၊ ပြီးတော့မယုံနိုင်ဖွယ် ကိစ္စလေး တွေဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်း ကျွန်တော့်အရင် တည်းခိုမိသူများ က စာအုပ်လေးရဲ့ နောက် ကျောဖက်မှာ မှတ်ချက်တိုလေးတွေ ရေးသွားတာကို ဖတ်ရတာကြောင့် မနက်ကျမှ တစ်ယောက် ယောက်ကို စပ်စုကြည့်ရမယ်။ အခု လောလောဆယ်တော့ မီးလုံးကိုမှိတ် အလျင်အမြန်ကို အိပ်မောကျသွားမိတော့၏။
အချိန်နည်းနည်းကြာသွားပြီးနောက်မှာ ကျွန်တော်လန့်နိုးလာခဲ့ ပါတယ်။ ပထမ ကျွန်တော်ဘယ်နေရာကို ရောက်နေခဲ့မှန်း သေ ချာမသိပါ။ နှင်းတွေဖွေးနေအောင် ကျနေတဲ့ တောင်စောင်း တစ်ခုကနေ မီးရောင်မှိန်မှိန်လင်းနေတဲ့ အခန်းလေးရှိရာ အား တင်းပြီး လျှောက်လှမ်းနေ တာ မရမက။ မျက်လုံးများဖွင့် လှိုက် မောစွာ အသက်ရှူပြီး ဟိုသည်ကြည့်မိတော့မှ အိုဟောင်းနေ သော တည်းခိုခန်းလေးရဲ့ အခန်းတစ်ခု ထဲက ခုတင်ပေါ်မှာမှန်း ပြန်သတိရမိရသည်ပဲ။ ပြန်အိပ်မပျော်သေးတာနဲ့ အသာငြိမ်ပြီး လှဲနေစဉ်ခဏ ပြတင်းကနေ ၀င်လာတဲ့ အလင်း မဟုတ်တဲ့ ပြတင်းပေါက်ထောင့်တွေ တံခါးမကြီးထောင့်တွေကနေ လင်း ထိန်လာတယ် အလင်းစက်တွေစုစည်းပြီး။ ကျွန်တော်ဖြင့် အ တော်အံ့သြသွားရသည် အာရုဏ်တက်တာမြန်လှချည်လား ဒီ တစ်ခါပေါ့။ ရုတ်တရက် အခန်းထဲ ရေးခဲတုံးတွေ ရောက်လာသို ကျောထဲ ကစိမ့်ကနဲဖြစ်သွားရတာကြောင့် မွှေးပွစောင်ကို ရင် ဘတ်ဆီဆွဲခြုံလိုက်မိတယ်။
အလင်းစက်တွေ တဖြည်းဖြည်းစုသွားပြီးနောက်အလွန်လှပ သော ချစ်စရာကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံ သဏ္ဌာန်ဖြစ်တည် လာသည်။ ကြောက်လန့်မှုကြောင့် မလှုပ် မရှားနိုင်ဖြစ်သွားသည့် ကျွန်တော် ကောင်ချောလေးကို မြင်ရ ချိန်မှာတော့ ကျေနပ်မှုကြောင့် သိပ်မကြောက်တော့။ သူ့တစ် ကိုယ်လုံးမှာ အလင်းတွေဖျာနေခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ် အပိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော် မြင်နေရသည်။ ဒီအခန်းထဲကို ကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့ဟန်အတိုင်း သူလျှောက်လှမ်းလာပြီး အရာ ရာကို လိုက်လံစစ်ဆေးနေသည်လားမသိ တစ်ခုခုကို ရှာနေ ဟန်။ သူဝတ်ဆင်ထားသည်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဒယ်ဒီတွေခေတ် ကလို ဘဲလ်ဘောင်းဘီ ၊ ကော်လံခပ်ကြီးကြီး ရှ့ပ်လက်ရှည်နှင့်။ ဒါတွေကိုမြင်ရတော့ တစ်ခါက ကြားဖူးနေရတဲ့ ပုံပြင်လေးကိုပြန် သတိရမိတယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ 'ပြည့်စုံ'နှင့် 'ရဲလှိုင်ဘွား'တို့အကြောင်း။ ဟုတ်တယ် ဒီကောင် လေးက ပြည့်စုံဆိုတဲ့ကောင်လေးဝတ်ဆင်ထားသည့် အတိုင်းပါ ပဲ။ အဲဒီနောက် အ၀တ် တွေကို စချွတ်နေတာကို မြင်ရချိန် ပိုင် စိုး ပိုင်နင်းအခန်းထဲလာလုပ်နေတယ် ခံစားရပေမဲ့ မျက်ဝန်းများ ကိုတော့ မှိတ်မပစ်မိ။
သူ့မညီမညာအ၀တ်အစားတွေကို ခပ်ဖြည်းဖြည်း ချွတ်တော့ အမွှေးအမျှင်မရှိ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို တွေ့ရသလို အောက်ပိုင်း ဘောင်းဘီတွေ ကိုဖယ်ရှားပြန်တော့ ချက်ကနေ ဆီးစပ်အထိ အမွှေးအမျှင်တန်းလေးက ၅လက်မလောက်ရှိတဲ့ ခပ်ပျော့ပျော့ -ိင်တံတစ်ချောင်းမှာ အဆုံး သတ်ရော။ နောက် အိပ်ယာဆီ လှမ်းလာပြီးလှဲချလိုက်တယ် သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကိုလေ။ ကျွန်တော်ဘေးကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပေမဲ့ အကွာအဝေး က သိပ်မ ရှိ။ မွေ့ယာပေါ်ဝယ် ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း လှဲလျောင်းနေတဲ့ သူ့ကို ကျွန်တော့်ဘေးမှာ အနီးကပ်တွေ့နေရသည်လေ။ အစ တုန်းကကြောက်လန့်နေခဲ့တာ အသားကုန်၊ အခုတော့လည်း ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စိတ်တွေရင်ထဲ အပြည့်ပါ။ သူ့အသွင်အပြင်က အရမ်း ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းနေတာကြောင့်ရော အရမ်းဖြစ်ကာ ကျွန်တော့်ဘေးမှာလှဲလျောင်းနေတာ ကြည့်ရင်းနဲ့ ပေါင်ကြား က ညီဘွားက တဖြည်း ဖြည်းမာလာတယ်။ ဒီတော့လည်း ညာဘက်လက်ကလေးနှင့် အသာကိုင်ပြီး စတင်အလုပ်လုပ်ရ တော့တာ။ မြင်နေရတဲ့ကောင်ချောလေး ကလည်း ထို့အတူ သူ့ရွှေနီငှက်ပျောကို ကိုင်ရင်းဆွနေတာ ကြည့်နေရင်း ကြည့်နေ ရင်း မိုးပေါ်ထောင်လာက ၇လက်မနီးပါးရှည်လာပါ ရော။ ဒီ အချိန်ကြောက်စိတ်ဆိုတာကို လာမေးရင်တော့ ရင်ထဲမရှိ တော့ဘဲ အဲဒီနေရာမှာ စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်မှုတွေက အစား ထိုးကာ သာသာယာယာပဲ သူ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်နေဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်လက်တွေက သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိကိုင်ဖို့ကြိုးစား ပေမဲ့ လေကိုသာထိုး ဖောက်သွားပါရော။
အမွှေးအမျှင်မရှိ ကောင်ချောလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ တဆတ်ဆတ် တုန်လာ ပြီးနောက် ရွှေနီကြီးကနေ အရည်ဖြူပျစ် ပျစ်တွေ ပန်းထုတ် လိုက်တာ သူ့ဦးခေါင်းပေါ်တောင် ကျော်သွားပါရဲ့။ အဲဒါပဲ. ...အဲဒါပဲ..... ကျွန်တော်လည်း မျက်လုံးများကိုမှေးမှိတ် လက်ကို ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားကာ ဗိုက်သားများပေါ် မထုတ်ရတာ ကြာ ပြီဖြစ်တဲ့ အရည်ပျစ်တွေကို အားရစွာ ပန်းထုတ်လိုက်မိပါ တယ်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာမှ မျက်ခွံများကို ပင့်ကြည့် လိုက် ရာမှာ အခန်းထဲ ဘယ်သူမှမရှိ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ။
အိပ်ယာပေါ်မှ ကျွန်တော်ထရပ်လိုက်ကာ အခန်းမီးကို ဖွင့်လိုက် ပါတယ်။ တစ်ရှူးစက္ကူဘူးကိုရှာကာ ဗိုက်သားပေါ်နှင့် တခြား ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းတွေကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတယ်။ ကျွန်တော့ကောင်ချောလေးပေါ်လာတဲ့ အခန်းထောင့်ကို သေ သေချာချာ စစ်ဆေးကြည့် တော့ ဘာအပေါက်မှမရှိ နံရံကြီး သက်သက်သာ။ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၃နာရီထိုး နေပြီမို့ အိပ်ယာဆီပြန်လာခဲ့ပြီး ခပ်ကြောင် ကြောင် အိပ်မက် တစ်ခုကိုများ မက်ခဲ့သလားတွေးမိရပါ၏။ ကျွန်တော်လှဲလျောင်း ခဲ့တဲ့နေရာရဲ့ ဘေးက ခေါင်းအုံးဆီကြည့်လိုက်တော့ အရည်ပျစ် အစက်အပြောက်များစွာ။ အဲဒါတွေို့ ငုံ့နမ်းရင်း အချို့ကို လက် ချောင်းနှင့်တို့ ပါးစပ်ထဲထည့်ကြည့်ဖြစ်ပါရော။ ကျွန်တော့်ဟာ မဟုတ်တာ သေချာတယ်။ ဒီလောက်ဝေးဝေး ကျွန်တော်မပန်း ထုတ်နိုင်ဘူး။ ရုတ်တရက် အလည်လာတဲ့ ရွှေဧည့်သည်လေး ပန်းထုတ် သွားခြင်းသာ။ နံရံက မီးကိုပိတ် သက်ပြင်းမောကို ဟူး ကနဲချကာ အိပ်ယာပေါ်လှဲလျောင်းပြီးနောက် နှစ်ခြိုက်စွာ ကျွန်တော် အိပ်ပျော် သွားရပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်နိုးထလာချိန်မှာတော့ နေရောင်ခြည်က အခန်း ပြတင်းကို ကျော်ဖြတ်လျက် တစ်ခန်းလုံးကို တောက်ပေနေစေ တော့သည်။ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရှင်းလင်းစွာမြင်မက်ခဲ့သော အိပ်မက်အကြောင်း ခေါင်းထဲရောက်လာပြန်တော့ နံဘေးက ခေါင်းအုံးကို ကြည့်မိပြန် တယ်။ ခြောက်သွေ့နေသော အရည် ကွက်အချို့။
နောက်တစ်နေ့မနက်ခင်းဟာ တည်းခိုခန်းလေးကို ပိုပြီး တောက်ပနေစေသလားပဲ။ အရသာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ နံနက် စာကိုစားသုံးပြီး ပြန်တော့ အာရုံထဲ မနေ့ညက အဖြစ်ကရှိနေ ဆဲ။ ယုတ္တိဗေဒနည်းလမ်းအရတော့ ဒါဟာ အိပ်မက်တစ်ခု။ ဒါပေမဲ့ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ဟိုဟာတွေကရော မသေချာလိုက် တဲ့အရာပါ။ အရာအားလုံး အစိတ်အပိုင်းတွေ ဆက်စပ်နေရတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခု အလား။
အလုပ်အကိုင် သဘာဝအရ ရက်အနည်းငယ်အားလပ်ရက် ရပြန်တော့ မြို့လေးသို့ပြန်လာကာ အရင်ကတည်းခဲ့တဲ့ အခန်း မှာပဲနေပြီး တစ် ခုခုကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ ကြိုးစားမိပြန်တာ လေ။ အလုပ်ကိုသေချာလုပ် ရက်သတ္တပတ်နောက်ဆုံးရက် တွေမှာ တည်းခိုနေကျ အခန်းမှာပဲ တည်းရဖို့ ကြိုးစားဖြစ်ပါ တယ်။
အလုပ်တွေပြီးဆုံးသွားတဲ့ သောကြာနေ့ညတစ်ညမှာ မြို့လေး ရဲ့တည်းခိုခန်းလေးဆီပြန်လာဖြစ်ပါတယ်။အစဦးရောက်ခါစတုန်းကလို ရာသီဥတုမဆိုးတော့ဘဲ မျှတနေပါရဲ့။ ညစာစားဖို့ စား သောက်ခန်းထဲဝင်လိုက်ချိန်မှာတော့ ဧည့်သည်နှစ်ဦးသည် လည်း ရောက်ရှိစား သောက်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အ ရာအားလုံးဟာ သာမန်အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော်ကသာ သောက် ရူးအိပ်မက်တစ်ခုမက်ပြီးတော့ အချိန်တွေဖြုန်းသလိုဖြစ်နေတာ ဖြစ်မယ်။ ဒီတည်းခိုခန်းပတ်ဝန်းကျင်လေးက မဆိုးပါဘူး တော အုပ်လေးတစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်နေတော့ အညောင်းအညာပြေ လမ်းလျှောက်လို့ရပါရော။ ကျွန်တော်တို့ ညစာစားသောက် ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ အချင်းချင်းမိတ်ဆက်ပြီး စကား စမြည် ပြော ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က အတော်အထာကျတဲ့သူ တွေပဲ။ gay စုံတွဲတစ်တွဲလို့ ကျွန်တော်တော့ ထင်တာပါ ဒါပေမဲ့ မသေချာပါဘူးလေ။ သူတို့တွေ ဘာကိုပြောဆိုနေကြမှန်း ကျွန်တော်အာရုံမစိုက်မိ။ 'စိုးသူရ'ဆိုတဲ့ ဘဲက ကော်ဖီသောက် ပြီး နောက် သရဲ ခြောက်လှန့်ခြင်းအကြောင်း စကားစတင်ပါ ရော။၀ိညာဉ်တွေ၊ သရဲတွေအကြောင်း ပြီးတော့ သူတို့တွေနှင့် လူသားတွေ ထိတွေ့လို့ရမရ ကိစ္စတွေလည်းပါသေးတယ်။ ဒီ တည်းခိုခန်းကလည်း နည်းနည်းခြောက်တယ်လို့ သူကြား သတဲ့။ 'စိုးသူရ'သူငယ်ချင်း 'နေမင်း'က အဲဒါ ကိုကြားတော့ သ ဘောကျစွာရယ်ပါရဲ့ စိုးသူရ သူရဲကြောက်တဲ့အကြောင်းတွေ ပြောပြီး။ ကျွန်တော်ကလည်း ပြောပြတာ ပေါ့ ဒီတည်းခိုခန်း မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ လူသေမှုအကြောင်း။ ကျွန်တော်တို့စားသောက် ပြီးတာတွေကို ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်က လာသိမ်း တော့ အဲဒီ့ အကြောင်း မေးမြန်းဖြစ်ကြပါတယ်။ တည်းခိုခန်း ၀န်ထမ်းပြော တာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတော်ကြာ တည်းခိုခန်းဆောက် လုပ်ပြီးခါစက တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား လူငယ်နှစ်ယောက် လာတည်းရင်း အကြောင်းရှာမရ ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း၊ လူ တွေခြောက် လှန့်ခံရတယ် ပြောကြပေမဲ့ သူ့အနေနှင့် အခုထိ မမြင်ဖူးကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ နေမင်းက ဒါတည်းခိုသူတွေကို ဆွဲဆောင်တဲ့နည်း တစ်ခုလို့ ထင်ပါသတဲ့။
စကားစမြည်ပြောရင်း လက်ဆုံကျနေကြတာ နည်းနည်း ညဉ့် နက်လာမှ လမ်းခွဲပြီး ကိုယ့်အခန်းကို ကိုယ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပါလာတဲ့ စာအုပ်တွေကို အတန်ကြာဖတ်နေပြီးမှ မီးပိတ်လိုက် ကာ အလျင်အမြန်ပဲ အိပ်မောကျသွားဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ် ကြိမ် နိုးလာတော့ အပြင်မှာ မှောင်နေတုန်းပါပဲ။ အလင်းစက် တွေက အရင်တစ်ခါပေါ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ထောင့်စွန်းကနေ ခပ်ဖြည်း ဖြည်းပေါ်လာတယ်။ ကြောက်လန့် ရမယ့်အစား ကျွန်တော် ရင်ခုန်စွာဖြင့် ပေါ်ထွက်လာမယ့်သူကို ကြည့်နေမိတာ ပထမ အကြိမ်က တွေ့ဖူးရတဲ့ကောင်ချောလေးပေါ်လာပါ ရော။ အမွှေး အမျှင်မရှိ ချောမွတ်တဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အ၀တ်တစ်ခုမှမပါ ရွှေနီငှက်ပျောသီးကြီး တရမ်းရမ်းနဲ့ ကျွန်တော်အိပ်နေရာဘေး ကို လျှောက်လှမ်းလာကာ ၀င်ပြီးလှဲလျောင်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်အစုံဟာ သူ့-ိင်တံရှိရာကို လှမ်းပြီး ကိုင်လိုက် ပေမဲ့ ဘာအထိ အတွေ့မှမရ။ ဒါပေမဲ့ မြင်နေရတဲ့ ကောင်ချော လေးရဲ့ -ီးနေရာကို အသာကိုင်ဟန်ဖြင့် ပွတ်သပ်ပြီးကစား လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေ နဲ့ ဘာဖီးလ်မှမရပေမဲ့ သူ့ ပစ္စည်းက ကျွန်တော်ပြုစုတာကို တုန့်ပြန်တာဖြင့် မာပြီး မိုးပေါ် ထောင်လာပါတော့တယ်။ ခပ်သွက်သွက် လက် ကိုလှုပ်ရှားပေး ဟန်ပြုနေတော့ သူ့ဗိုက်သားတွေ ရေပြင်အလား လှိုင်းထကာ လှုပ်လာတော့ ဒါသူ ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ရိပ်မိပါ ပြီ။ မျက်စိကို အသာမှန် သူ့-ီးရှိရာကိုမှန်းကာ ကျွန်တော့်ပါးစပ် အတွင်းထည့်လိုက်တာ ရုတ်တရက် -ီးတစ်ချောင်းပါးစပ်ထဲရှိ နေတာကို ခံစားလိုက်ရာပြီး လည်ချောင်းထဲသို့ ပျစ်ချွဲချွဲအရည် တွေ ရောက်ရှိတာကို ခံစားရပါ၏။ မျက်သန်းများကိုဖွင့် သူ့ မျက်နှာကိုကြည့်မယ် လုပ်တော့ မရှိတော့ သွားပြီ။
အိပ်ယာပေါ်ကနေ အမြန်ထ နံရံကမီးကိုဖွင့် မှန်ထဲကြည့်လိုက် တော့ သံသယမရှိဖွယ် ပါးစပ်နှင့်အပြည့် ကောင်ချောလေးရဲ့ ရွှေရည်တွေ။ ခရီးဆောင်အိတ်ထဲက ပလတ်စတစ်အိတ် အ ကြည်တစ်ခုကိုယူကာ အဆိုပါအရည်ပျစ်တွေကို ထွေးထည့် လုံခြုံစွာပိတ်ရင်း စားပွဲက အံဆွဲထဲမှာ သေချာထည့်ထားလိုက် ပါရဲ့။ ကျွန်တော့်မှာ အိပ်ယာပေါ်ပြန်လှဲပြီး နောက်ဆုံးမှာ အိပ် စက်ရလေသတည်းလေ။
ချစ်စရာဆောင်းဦးမနက်ခင်းလေးက လေအေးအေးဖြင့်နိုးထစေ ပါတယ်။ အိပ်ယာပေါ်ကထထခြင်း စားပွဲအံဆွဲကို ပလတ်စတစ် အိတ် အဖြူကို ယူပြီးအထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကို အနံ့ရှူကြည့် လိုက်တယ်။ သိပ်သေချာတာပေါ့ ဒါသုတ်ရည်တွေ။ ရေချိုးသန့် စင်ပြီးနောက် မနက်စာစားဖို့အောက်ထပ်ဆင်းခဲ့ပြီး မျက်လုံးဝေ့ ကြည့်လိုက်တာ့ စိုးသူရ နှင့် နေမင်းတို့ကရောက်နေကြပြီ။ သူတို့တွေ ချစ်သူစုံတွဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်ပိုပိုပြီး သဘော ပေါက်စပြုလာပါရဲ့။ နှစ်ဦးသားလမ်းလျှောက်ထွက်ကြမလို့တဲ့။ ရိုးရာအစားအစာတွေမြည်းစမ်းဖို့ ကျွန်တော်လည်း သူတို့နှင့် အတူလိုက်ခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်တာကြောင့် လိုက်သွားဖြစ်ပါတယ်။ စိုးသူရတို့နှစ်ယောက်ဟာ အတော်ကြည့် ကောင်းအဆင်ပြေ ကြတဲ့ ဘဲတွေဗျ။ သူတို့နှင့် လမ်းလျှောက်ပြီး စကားပြောရတာ အတော်ကောင်းတယ်။ ပြောရင်း ပြောရင်း ပွင့်လင်း လာကြပြီး gay စုံတွဲအဖြစ်နေထိုင်ကြခြင်းရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက် တွေပြောကြ၊ ကျွန်တော်သည်လည်းgay ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြော မိပါ တယ်။ ကိုယ်ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးမှာ အထိအခိုက်မရှိရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာ ဆွေး နွေး ရင်းနှင့် မနေ့ညကအဖြစ်အပျက်ကို သူတို့ကိုပြောပြ ချင်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ မပြောဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့မြို့လေးထဲကိုဝင်ကြည့်မှ အတော်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး နေတာကိုတွေ့ရသလို သဘောလည်းကျမိပါရဲ့။ မြို့မဈေးကြီး ထဲမှာလည်း အတော်စုံလင်လှတာကိုတွေ့ရ့ပါတယ်။ ဈေးကြီး နှင့် မလှမ်းမကမ်း ရပ်ကွက်ထဲမှာလည်း ၅ရက်တစ်ခါဈေးလို့ ခေါ်မလား ၅ရက်နေမှ တစ်ခါ ရွာနီးချုပ်စပ် ကလာရောင်းကြတဲ့ ဈေးတန်းကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်။ အိမ်ပြန်လက်ဆောင် အဖြစ် ဂျူးမြစ်ပါတဲ့ ပဲပုတ်ပြားတွေ၊ ဂျင်းပါတဲ့ ပဲပုပ်ပြား၊ ခေါပုပ် တွေ ဆိုးဆေးမပါ လက်ဖက်ညွန့်တွေ ၀ယ်လိုက်တာ ကြွပ်ကြွပ် အိပ်ကြီးတစ်လုံးအပြည့်မှ ၅၀၀၀ကျပ်လောက် ကျတာဗျ။ လက် ဖက်ခြောက်တွေ၊ တို့ဟူးခြောက်တွေလည်းပါတာပေါ့။ ဘော်ဒါ နှစ်ယောက်ကတော့ တို့ဟူးနွေးနှင့် ဆန်စီးကို သူတို့ အခေါ် ရှမ်းချဉ်နှင့် အားရပါးရတီးနေတာများ ရယ်ချင်စိတ်ကိုဖြစ်မိပါ တယ်။ နောက်တစ်ခါရောက်ရင် မြို့ထဲကို လာလည်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ် မိပါပြီ။
ညနေလည်းစောင်း လူတွေလည်း ဖားမှ မြို့လေးအစွန်က တည်းခိုခန်းဆီပြန်လာဖြစ်ကြပါတယ်။
အခန်းရှိရာကိုတက်လာ ပြီး ရေမိုးချိုးဖို့ ပြင်ဆင်ခါ ဘုံရေချိုးခန်းဆီလှမ်းဖြစ်တာပေါ့။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ၀တ်ဆင်ကာ ညစာစားဖို့ စားသောက်ခန်းဆီ သွားတော့ စိုးသူရတို့အတွဲက စားစပြုနေပါပြီ။ ကျွန်တော် လည်း သူတို့နှင့်အတူ ၀ိုင်းထိုင်ကာ ငါးဒုက္ခနှင့် ဆွဲလိုက်ပါ တယ်။ ထမင်းစားအပြီး စကားလက်ဆုံကြရင်း ခဏ ပဲရှိသေး အိပ်ချင်စိတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာတာကြောင့် သူတို့ ကို Excuse လုပ်ကာ အခန်းကိုပြန်လာဖြစ်ပါတယ်။ လေချွန်သံ လိုလို ပြီး တော့ ပြတင်းမဖွင့်ထားဘဲ အခန်းထဲအေးစက်လာ မှုကြောင့် ကျွန်တော်နိုးလာပြန်တော့ အပြင်မှာ မဲမှောင်တုန်း ပါပဲ။ မြင်တွေ့နေ ကျ အလင်းစက်လေးတွေ စုစည်းတာကို မြင်ချင်မိပေမဲ့ ဒီတစ်ခါ ဘာမှမမြင်ရပါ။ အတန်ကြာစောင့်ကြည့် နေပေမဲ့ ဘာမှဖြစ်မလာပါ။ အိပ်ယာ ပေါ်မှာ အသာလှဲလျောင်း ရင်း ၁၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ ကျွန်တော့်အထင် အခန်းထဲ တစ်ယောက်ယောက်ရွေ့လျားလာကာ ခုတင်ရှိရာကို လှမ်းလာ တယ်လို့ အာရုံက ခံစားမိနေရသလိုပါပဲ။ ကျောထဲစိမ့်တဲ့အထိ ကြောက်လန့်မိသလို စိတ်လည်း တပြိုင်နက်လှုပ် ရှားမိပါရဲ့။
လက်တစ်ဖက်....မမြင်ရတဲ့ လက်တစ်ဖက်ဟာ ကျွန်တော့် ည၀တ်ဘောင်းဘီကို ပွတ်သပ်ကာ အတွင်းထဲက ညီဘွားကို ကိုင်လိုက်တာကို ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်ကို ဘေး ဘက်ဆီ ရောင်ရမ်းစမ်းသပ်လိုက်တော့ အမွှေးအမျှင်မရှိ ချော မွေ့တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို စမ်းမိသလို ဗိုက်သားနေရာကနေ အောက်ကို ရွေ့လာတော့ ဆီးစပ်အထိ ဆက်စပ်နေတဲ့ အမွှေးနု လေးတွေကတစ်ဆင့် ၇လက်မနီးပါးရှိတဲ့ -ိင်တံကြီး ကို ကိုင်မိပါ ရော။ ထို့အတူ ကျွန်တော့်-ီးကိုဆွဲပြီး ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်တာ ကို ခံစားရမိပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အစုပ်အမှုပ်တွေ ခံစားနေရ ရင်း အခန်းထဲ အလင်းစက်တွေပိုမိုစုစည်းလာကာ ကျွန်တော့်ဆီ ပုံမှန်လာနေကျ ဧည့်သည်လေးက အားရပါးရပြုစုနေတာကို မြင် လိုက်ရ ပါပြီ။ အခုတော့ အမှန်တကယ် အထိအတွေ့ကို ခံစားရ ပြီပေါ့လေ။
သူကျွန်တော့်-ီးကို အရင်းမှာ ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း -ိင်တံတ လျှောက် လျှာဖျားလေးနှင့်လျက်တယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ကာ ဖီးလ်အရှိန်မြှင့်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ ရွှေဥ တွေကို တစ်လုံးခြင်း ငုံစုပ်တော့တာ။ သူ့လှုပ်ရှားမှုမှာမြောနေ တဲ့ခဏ သူ့ဦးခေါင်းဟာ ကျွန်တော့် ခြေထောက်တွေကြားငုံ့ လျှိုးလာပြီးနောက် ခရေ၀ဆီလျှာဖျားလေးက ၀ိုက်ကာ ၀ိုက်ကာ ဖြင့်ခံစားမှုတွေ ဟိုးအမြင့်ဆီရောက်အောင် သူ လုပ်ပါပေါ့။ လျှာ ဖျားလေးကိုမာအောင်လုပ်ရင်း ခရေ၀ထဲ ဖိကာဖိကာဖြင့် တွန်း တာ.....အား.....ဘယ်လိုဖီးလ်မှန်းမပြောတတ်ဘူး။ ရုတ်တရက် သူထရပ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေကို ပခုံးပေါ်ထမ်း တင်လိုက်ရင်း ရွှေနီငှက်ပျောကြီးကို ကျွန်တော့်ခရေ၀ဆီတေ့ ကာ နှဲ့သွင်းသွင်းပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်အခုအဖြစ်အပျက် ကို အိပ်မက်လို့ ထင်ရအောင်လည်း ခရေ၀က နာကျင်မှုက အစစ်အမှန် ခံစားနေရတာ။ တင်ပါးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ကိုင်တွယ် ရင်း သူ့ဒစ်ကိုရှန်တိန်လုပ်ကာ အဆုံးထိသွင်းလိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်အောင့်ကနဲ ဖြစ် သွားရပါ၏။ ခပ်ဖြေးဖြေး သူအထုတ် အသွင်းလုပ်နေစဉ်မှာပဲ အခန်းထဲ အလင်းပိုမိုများလာပြီးနောက် ကျွန်တော့်မျက်နှာအနီး နောက်ထပ် ကောင်ချောလေးတစ်ပွေ အ၀တ်မပါ ဗလာကိုယ်ထီး မာတောင်နေတဲ့ သူ့-ီးကိုကိုင်ရင်း ပေါ်ထွက်လာပြန်သည်။ သူ့ပစ္စည်းသွင်းနိုင်ဖို့ ကျွန်တော့်ပါးစပ် ကို အသာဖွင့်ပေးလိုက်တော့ ရှည်လျားလှတဲ့ဟာကို အလိုက် သင့်ထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ တစ်ယောက်က လည် ချောင်းထဲ အထိ သွင်းချိန် နောက်တစ်ယောက်က ခရေ၀က အပြင်ကို ထုတ်တယ် အထုတ်အသွင်း တိုင်ပင်ကိုက်သလို သူတို့ အရှိန် မြှင့် နေကြတော့တာ။ ခဏနေတော့ သူတို့ပစ္စည်းတွေ ပိုမိုကြီး ထွားလာသလို ခံစားရပြီးနောက် ရွှေရည်တွေို့ သူတို့ထည့်သွင်း ထားတဲ့အ ပေါက်တွေထဲ တပြိုင်တည်းလိုလို ပန်းထည့်ကြပါ တော့တယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ မျက်စိမမှိတ်မိဖို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံး ပစ္စည်းတွေကို အသာဆွဲထုတ်လိုက်ကြ ပြီးနောက် ကျွန်တော့်ဘေးမှာ အသာလှဲလျောင်းကြတယ်။ ခဏ ကြာတော့ နှစ်ယောက်လုံးထလိုက်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲကို တစ်ပြိုင်တည်းပြုစုပါရဲ့။ တစ်ယောက်နှုတ်ခမ်းက ကွမ်းသီး ခေါင်းဆီ လှုပ်ရှားနေချိန်မှာ နောက်တစ်ယောက်က ရွှေဥများ ဆီမှာ။ ဒုတိယပေါ်လာသော ကောင်လေး က မတ်တပ်ထရပ် လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ပေါ်ခွထိုင်လိုက်ပြန်ကာ သူ့ခရေ၀ဆီ ကျွန်တော့်-ီးကိုဖိသွင်းရင်း ထိုင်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ တင်ပါး တွေဟာ မြေ္ဓာက်ကာ မြှောက်ကာထိုင်ထိုင်ချနေတာကိုကြည့် ရင်း သူ့အတွေ့အကြုံရှိတာကို မှန်းမိရပါတယ်။
ပထမကောင် ချော လေးကတော့ သူ့ဘော်ဒါရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ပြင်သစ်အ နမ်းတပ်မက်စွာပေးနေတာ ထောင်မတ်နေတဲ့ ငပဲကြီးကို ကျွန်တော်အသာဆွဲ ကိုင်ရင်း ကစားပေးမိပါရဲ့။ ဒုတိယ ကောင်လေးရဲ့ အားမာန်ပါပါ ဆောင့်ချက်များကြောင့် ကြာရှည် မထိန်းနိုင်တဲ့ ကျွန်တော် အချက် နှစ်ဆယ်လောက် ဆောင့်သွင်း ပြီးချိန်မှာတော့ ကောင်လေးတင်ပါးများနှင့် ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေ ကို ဖိကပ်ထားရင်း အားရစွာပန်းထည့်ပစ် လိုက်တယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်သားသည်လည်း အလျင်အမြန် ကိုယ်စီ ဗုံတံခေါက် ကြရင်း ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို ပျစ်ချွဲချွဲအရည်များ ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းသွားစေပါ၏။ အဲဒီနောက်မှာတော့ နှဏ်ယောက်သား ကျွန်တော့်နံဘေးမှာ မောလျစွာလှဲလျောင်းရင်း အိပ်ပျော်သွား ကြပါ တော့တယ်။ သတိထားနေရင်း ထားနေရင်းနှင့် ကျွန်တော် သည်လည်း နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်သွားတော့တာပေါ့ မကြာခင်။
အရမ်းအေးစက်တဲ့ ခံစားမှုကို ရရှိလို့ နိုးထလာချိန်မှာ မိုးမလင်း သေးပါ။ အခန်းမီးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်။ အိပ်ယာတစ်ခု လုံး ဖရိုဖရဲ၊ အိပ်ယာခင်းတွေ စောင်တွေသည်လည်း ကြမ်းပြင် ပေါ်မှာ။ နေရာတိုင်းမှာ စိုစွတ်နေသော အကွက်ငယ်များနှင့်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် မှာလည်း စေးကပ်ကပ်ဖြစ်နေသလို ခရေ၀မှာလည်း နည်းနည်း နာကျင်မှုကို ခံစားရတယ်။ ကဲ... ဘာမှ မစဉ်းစားတော့ပဲ စောင်ကို ကောက်ယူလိုက်ကာ အိပ်ယာ ပေါ်လှဲ အိပ်စက်လိုက်သည်လေ။ မနက်ခင်းမှာတော့ ရေမိုးချိုး သန့်စင်လိုက်ကာ အထုပ်အပိုးတွေပြင်ဆင် ပြန်ဖို့အသင့်လုပ် ထားလိုက်ပါတယ်။ မနက်စာစားဖို့ အောက်ထပ်ကို ဆင်းလာ တော့ ဗိုက်ထဲအရမ်းကို ဆာလောင်လာတာကြောင့် ခပ် များ များလေးစားဖြစ်ပါရဲ့။ စိုးသူရ နှင့် နေမင်းတို့ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တို့ လိပ်စာတို့ကို ကျွန်တော့်လိပ်စာကဒ်ဖြင့် လဲလှယ်ကြပြီးနောက် သူတို့ ကို တစ်ခါတည်းနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် မိုးမခ တည်းခိုခန်းလေးကို အကြိမ်များစွာ ထပ်သွား ဖြစ် တည်းခိုဖြစ်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညတွေမှာ ဘာသံမှ မကြားရတော့ သလို ဘာမှလည်း မဖြစ်တော့ပေ။
စာကြွင်း။ ။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ မြို့ကလေးကို သွားလေ့လာစမ်းသပ်မှုအချို့လုပ်ကြည့်တဲ့အခါ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်က ကျောင်းသားလေးနှစ်ယောက် အလည်လာရင်း ညတစ်ညမှာ သူတို့တည်းတဲ့ အခန်းထဲ အလင်းတွေဖြာပြီး ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း။ တည်းခိုခန်းပိုင်ရှင်ကတော့ သေဆုံးသွားကြတယ်လို့သာ ဘယ်သူမေးမေးဖြေကြောင်း သိခဲ့ရပါတော့တယ်။
Alex Aung (9 August 2010)
Posted by Alex Aung at 10:54 AM No comments: